Tag: ahịa map | Martech Zone
Tag: ahịa map
Etu esi edobe njem ndi ahia gi
Tuesday, January 24, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Nnukwu ọganihu na nyocha ahịa na akwụkwọ bụ mmalite nke maapụ ndị ahịa na-aga iji nyere aka depụta, tụọ ma melite arụmọrụ ahịa gị - ọkachasị n'ịntanetị. Kedu ihe bụ Njem njem Ndị Ahịa? Maapụ njem ndị ahịa bụ otu ị si eji anya nke uche hụ ahụmịhe ndị ahịa gị na akara gị. Maapụ njem ndị ahịa na-edetu akara aka ndị ahịa gị n'ịntanetị na offline na akwụkwọ otu ị ga-esi tụọ mmetụta aka ọ bụla. Nke a na-enyere ndị ahịa aka ịghọta nke ọma otu ndị ahịa